स्लिम बन्ने चाहनाले भयो यस्तो हालत! – Rastriyapatrika
स्लिम बन्ने चाहनाले भयो यस्तो हालत!
एजेन्सी। पछिल्ले समय सबैजसो युवतीलाई स्लिम बन्न मन लाग्छ । स्लिम र फिट देखिने चाहनाले ती युवतीहरुले अनेकौं उपायहरु अपनाउँछन् । तर, अमेरिकाको न्यूयोर्ककी एक युवतीको लागि स्लिम देखिन डाइटिङ गर्नु उनको जीवनकै सबैभन्दा ठूलो भूल भएको छ ।